Miresaka amin’ny Fiteny kaqchikel Ihany Koa Ankehitriny Ny Famoronana Sy Ny Teknolojia · Global Voices teny Malagasy
Miresaka amin'ny Fiteny kaqchikel Ihany Koa Ankehitriny Ny Famoronana Sy Ny Teknolojia
Mpanoratra Zapoteco 3.0 (Rodrigo Pérez) Nandika (fr) i Sarah Labetoulle, imanoela fifaliana
Voadika ny 11 Septambra 2016 14:34 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, Español
Ny dindon'ny mety hahalany tamingana ny fiteny sy ireo fahalalàna ao amin'ny kolontsaina kaqchikel: ireo no singa nitarika an'i Juan Esteban Ajsivinac Sián, mpanelanelana ara-pitenenana avy amin'ny foko maya, mba hikaroka ireo fomba vaovao hampiroboroboana indray ny fiteniny amin'ny alalan'ny teknolojia. Avy any Patzicia i Juan (ao amin'ny faritr'i Chimaltenango, ao Goatemalà), miteny maya cakchiquel (na kaqchikel). Fitenin'ny vahoaka kaqchikel io, izay hita ao amin'ny faritra afovoany andrefan'i Goatemalà, izay napetrany ho ivon'ny asa manakambana ny famoronana ara-teknolojika sy ny asa fiarovana ny kolontsaina ary ireo fiteny:
Tena malahelo ireo antitra satria ho very ho hiafaran'ireo fahalalàn-dry zareo ireo arakaraky ny itsaharan'ireo tanora tsy miresaka intsony amin'ny fiteny kaqchikel.
Ao anatin'ny vondrom-pitenenana k'iche’ ny kaqchikel, io ihany koa dia mbola ao anaty zanatsampan'ny fianakavian'ny fiteny maya. Misy eo amin'ny mpiteny antsasaka tapitrisa eo ho eo, io no anisany iray amin'ireo fiteny mayas fototra ao Goatemalà.
Sahala amin'ny ankamaroan'ireo fiteny vazimba ao Amerika Latina, ny kaqchikel no fiteny manomboka miha-lany tamingana. Tsipihan'i Juan Sian fa ao anatin'ireo vondrom-piarahamonina maya maro ao Goatemalà, tsy te-hiteny an'io fiteny io intsony ireo tanora, satria mihevitra izy ireo fa tsy mitondra inona ho azy ireo intsony ny fiteny kaqchikel. Izany indrindra no antony hitarihana azy ireo mba ho voasarika indray amin'io fiteny io, izay heverina fa ho azo atao amin'ny alalan'ny teknolojia sy ny aterineto.
Fototry ny aingam-panahy nanosika azy ny fitsidihana iray tany Espaina. Nandritry ny fitsidihana ireo namana, nandinitra ny dingana hanomezana aina vao indray ny kolontsaina baska amin'ny alàlan'ny fiteny i Juan, ny euskara. Tena niaiky izy tamin'ny fahafahana manavotra fiteny iray efa mihalevona tsikelikely amin'ny alàlan'ny tahiry sy ny teknolojia.
Resy lahatra tamin'ny hoe afaka ampifoboroboana ny fanelezana ireo fiteny vazimba ny fampiasana ireny fitaovana ireny mifanaraka amin'ny tokony ho izy, nanomboka nampiditra ny fiteniny tao habaky ny aterineto i Juan. Voalohany indrindra, nadikany tamin'ny fiteny kaqchikel aloha ny tranonkalan'ny Futuros Colectivos, fandraisana andraikitra iray izay namondronana fikambanana maromaro manao asa an-tsitrapo ho fampandrosoana ny faritra ao Goatemalà.
Ny asany faharoa dia avy amin'ny ‘fondation’ Buca’ bok, izay mifototra tanteraka amin'ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina ao Goatemalà: nanolo-kevitra azy mba handika plug-in iray izay ahafahana mahazo mpanelanelana ny fiteny kaqchikel amin'ny Facebook izy io. Ho an'ireo izay miasa ao anatin'io fondation io, ny fahafehezana ny fiteny no tena ilaina satria izay no ahafahan'ireo mpitsabo mitsabo ireo vahoaka izay tsy miteny afatsy fiteny tokana ao amin'ilay faritra nanana fahafahana niditra tamin'ieo tolotra ara-pitsaboana, amin'ny ankamaroany ahitana ireo olona efa nahazo taona.
Koa satria ampiasaina be io tambajotra sosialy io, nahafahan'ny fondation nanofana ny mpiasany hampiasa ilay fiteny io dika amin'ny fiteny kaqchikel. Efa misokatra io ampahany io ary azo ampiasaina eo amin'ny pejin'ny Wuqu’ Kawoq io dika io amin'izao fotoana izao. Lasa teboka fiaingana ho an'ireo famoronana maro hafa ny fanehoankevitr'ireo mpampiasa, rehefa hitan'izy ireo tao anatin'ireo vovonana tamin'ny tambajotra ny fitenin'izy ireo.
Ny fahatelo ary angamba ny zava-bita lehibe nataon'i Juan, dia ny fananganana vovonana iray amin'ny tranonkala izay mandray ny voambolana kaqchikel. Eo amin'io tranonkala io, hita ao avokoa ny voambolana rehetra mikasika ilay fiteny. Fanampin'izay, atolotr'ilay vovonana ihany koa ny safidy iray ahafahana mampitombo ireo angon-drakitra. Rehefa tsy mahita izay teny tadiaviny ny mpampiasa, dia afaka mampilaza ireo tomponandraikitry ny pejy amin'ny alalan'ny famaliana fanontaniana sy fahazoana valiny anatin'ny ora vitsivitsy aty aoriana. Ankehitriny ny boky mirakitra ny voambolana novokarin'i Juan dia hita ao amin'ny Akademian'ireo fiteny mayas ao Goatemalà, sampan-draharahan'ny governemanta misahana ireo asa fanamafisana ireo fiteny fampiasa ao Goatemalà.
Vao avy namita ny fanodnroan-toerana ho an'ny Firefox amin'ny solosaina sy ny Firefox amin'ny Android i Juan Sian izao. Ofisialy ireo ampahany roa ireo ankehitriny ary azo ampiasaina amin'ny solosaina natokana ho an'ny birao sy azo entin-tànana ny fidirana amin'ny toerana misy ny fiteny kaqchikel. Iray amin'ireo fiteny vazimba teratany roa mahazatra ao Amerika latina ihany koa ny kaqchikel izay azo alaina eo amin'ny vavahadin-tseraseran'ny Firefox. Mba hanaovana io asa io, voatery nandika andalana maherin'ny 52 000 i Juan izay mandrafitra ny fanondroan-toeran'ilay fitety.
Anisany iray amin'ireo sakana lehibe izay nosedran'i Juan nandritra ny fotoana nampidirany ny fiteniny tao anatin'ny tontlon'ny teknolojiam-baovao, ny fisafidianana ireo fomba filaza amin'ny informatika amin'ny fiteny kaqchikel. Nahadika ireo teny sasantsasany sy nahaforona hafa koa i Juan rehefa tsy hitany ireo notadiaviny, tamin'ny alalan'ireo angona sy ireo voambolana amin'ny fiteny efa nisy teo an-toerana. Araka izany lasa « Kematz'ib » amin'ny fiteny kaqchikel ny teny hoe « solosaina», izay midika ho “rarinteny na marika”.
Anisany amin'ireo tetikasany, mikarakara famoriana an'ireo boky misy voambolana sy ireo angona amin'ny fiteny kaqchikel rehetra efa misy i Juan mba hametrahana fomba tokana hampanaraham-penitra sy haha-ara-dalàna ilay fiteny. Ny tanjona dia ny hanakambananany zavatra rehetra ho ao anaty angona tokana.
Araka izany dia hitohy ny asan'i Juan Esteban Ajsivinac Sián mba hsampiroboroboana ny fampiasana ny fiteniny ao anaty habaky ny aterineto, satria toy izay efa fantatr'ireo mpiteny ny fiteny maya tsara:
Tsy natao mba hifampiresahana fotsiny ny miteny amin'ny fiteny iray ; mitarika [koa] andiana fahalalana maro izay ho very ao amintsika io raha toa isika tsy manao na inona inona mba hitahirizana azy ireo.
MpanoratraZapoteco 3.0 (Rodrigo Pérez)
Nandika (fr) i Sarah Labetoulle
Tantaran'ny Goatemalà farany
09 Marsa 2021Amerika Latina
‘La Llorona': Horonantsary any Goatemalà manambatra ny horohoro sy ny politika hitantarana ny ady an-trano mampalahelo
15 Novambra 2020Amerika Latina
Goatemalà: Dokambarotra tsy mahasarika
17 Oktobra 2020Fanoherana
‘Hira tsy misy tahotra': Manohitra ny herisetra atao amin'ny vehivavy amin'ny alàlan'ny mozika ny vehivavy Goatemalteka
4 andro izayAzia Atsimo
Mpiasa mpifindramonina Nepali nody rehefa nandany 40 taona tany amin'ny rafi-pamonjana Indiana